Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka oo shiray | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Midowga Musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 ayaa shir kula yeeshay aaladda fogaan aragga qaar kamida xubnaha wakiillada Beesha Caalamka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulan muhiim ah ayaa wuxuu dhexmaray safiirrada dalalka Ingiriiska, Midowga Yurub, Mareykanka iyo Qaramada Midoobay iyo qaar ka mid ah Midowga Murashaxiinta, waxaana kulanka looga hadlayay arrima la xiriira doorashada.
Sida aanu kasoo xiganay xubnihii ka qeyb galay shirka waxaa la isku afgartay dhammaan qodobbadii laga wada hadlay, iyadoo labada dhinac la is dhaafsaday aragtiyada gaarka ah ee dhinacyada shirka.
Golaha midowga musharaxiinta ayaa waxay u sheegeen Beesha Caalamka in ciidanka diiday muddo kororsiga ay mahad celin mudanyihiin dhammaantood maadaama ay waaqac u turjumeen rabitaankii shacabka, Soomaaliyeed iyo baaqyadii Beesha Caalamka ee ku aaddanaa muddo kordhinta, taasoo uu Farmaajo dhegaha ka furaystay, sida ay ku doodeen.
Waxaan kaloo la isku raacay in la taageero dadaallada Ra'iisl Wasaare Rooble, lana suuliyo caqabadaha ku gudban midaynta ciidanka iyo qabashada doorasho la isla ogolyahay.
Dhinacyadii ka qeyb galay shirka ayaa qiray dhammaantood in natiijo wanaagsan iyo is afgarad laga gaaray ujeedooyinkii shirka, iyadoo xubnaha wakiilada Beesha Caalamka ay sidoo kale shir la yeesheen Ra'iisul Wasaare Rooble.